Indoda yesithembu ezigqajayo: Kuthatha indoda enamandla ukugcina amakhosikazi amaningi ejabule | Scrolla Izindaba
Indoda yesithembu ezigqajayo: Kuthatha indoda enamandla ukugcina amakhosikazi amaningi ejabule
Ukuba semshadweni wesithembu akukhona ukuhamba njalo epaki.
Lokhu kushiwo nguFanyane Hlongwane oneminyaka engama-64 ubudala onesithembu.
“Uphoqelekile ukuthi ubhekane nezimilo zabantu abehlukene. Kuthatha indoda eqotho ukugcina bonke abafazi bayo bejabule,” esho.
UHlongwane, oyinyanga yesintu, yase-Stinkwater, e-Tshwane, ushade namakhosikazi amane. Unezingane ezingama-28, abazukulu abangama-40, kanti futhi usehlukanise namakhosikazi ayisithupha empilweni yakhe.
Uthe imishado yesithembu iyawohloka uma amakhosikazi exabana.
“Ukuqhekeka kunoma yimuphi umshado kuqala uma kukhona intandokazi,” esho.
“Bonke bafuna ukunakwa nguwe futhi kufanele banakwe ngendlela ekuvunyelwane ngayo.”
Uthe, ngokwezezimali, umyeni kufanele avuleleke kubo bonke.
“Kumele bazi ukuthi unamalini ngenyanga ukuze nonke nikwazi ukwenza isabelomali,” esho.
Uthe omkhulu bakhe bobabili babenamakhosikazi amathathu, kanti ubaba wakhe wayeshade namabili.
“Omalume bami babeshade namakhosikazi angaphezu kweyodwa. Uma owesilisa ekwazi ukuthanda nokuxhasa imindeni emikhulu ngokwezimali kufanele azibophezele ekubekeni isithembu,” esho.
Ngesikhathi eneminyaka engama-21, uHlongwane washada nesithandwa sakhe, kodwa ngoba unkosikazi wakhe naye wayeqhamuka emndenini onesithembu kwaba lula ukuthi ashade unkosikazi wesibili eneminyaka engama-23.
Uthe akakaze akhohlise amakhosikazi akhe futhi ahlezi azi ngezinhlelo zakhe.
“Uma bengahambisani nokuthi ngishade nowesifazane othile, ngiyasihlonipha isifiso sabo bese ngiqhubekela phambili,” esho.
Usebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi amakhosikazi nezingane zakhe abalali bengadlile. Yize noma amakhosikazi akhe amabili esebenza awavumelekile ukondla izingane zakhe.
Uthe wakhela amakhosikazi akhe endaweni efanayo futhi uchitha izinsuku ezintathu ngasikhathi sinye nenkosikazi ngayinye ukubagcina benelisekile.
“Siya ezihlolweni ezijwayelekile zokwelashwa okubandakanya i-HIV,” esho.
“Ngibathanda bonke abafazi ngokulingana. Sibe ngumndeni omkhulu, ojabulile iminyaka engama-35.”